Madaxweynaha Puntland oo Xariga ka Jaray Laba Laami Magaaladda Gaalkacyo[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Puntland oo Xariga ka Jaray Laba Laami Magaaladda Gaalkacyo[Sawirro]
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray laba laami oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka Magaalada Gaalkacyo Gobalka Mudug ee Puntland.
Xafladd kooban oo loo qabtay xarig jarka laamiyadaasi ayaa waxaa kasoo qeyb-galy Wasiiro, Xildhibaano, Haween iyo Dhalinyaro ku labisanaa dharka hiddaha iyo dhaqanka isalamrkaana lulayey caleemo qoyan iyo calanka Puntland.
Wadooyinkaan laamiga ah oo ay fulisay Dawladda Puntland waxaa ay dhererkoodu dhan yahay 2,600mitir iyo 650mitir , waxaaana ay ka qeyb qaadanayaan bilicda iyo Nabadgelyada Puntland gaar ahaan Gobalka Mudug.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khudbad ka jeediyey madasha ayaa sheegay in fulinta wadooyinkaan ay kamid yihiin mashaariicda Dawladdu ugu talagashay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug.
Waxaan rabnaa in magaalada laamiyaal iyo jidad wanaagsan yeelato , waxaan sidookale rabnaan in magaalada bilicdeeda wax iskabadalaan , marka waxaan rajeyn inaad diyaar u tihiin jidadkaan iyo jidadkale oo bilacda magaalada ka qeyb qaadanaya , idina waxaa laydinka rabaa meeshi la marin lahaa ‘’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan Gobalada Puntland waxaa si habsami leh uga soconaya mashaariicda Dawladda , kuwaas oo si dar dar leh loo fulinayo si isbadel wanaagsan oo dhinackast ah Puntland looga dareemo looguna horumariyo.